Wednesday September 06, 2017 - 10:01:39 in Wararka by Super Admin
Adeegga DACA oo uu bixiyay Brack Obama sanaddii 2012 ayaa damaanad qaad sharciyadeed siinaya dad ku dhow 800 oo kun Mareykan ah kuwaas oo ubadan dhallaanka dadka muhaajiriita soo galootiga ah.
Wasiirka cadaaladda Mareykanka oo shir Jaraa’id ku qabtay magaalada Washington ayaa sheegay in Trump uu xasaanadii kala laabtay adeegga DACA arrinkaas oo walaac ku beeray boqolaal kun oo shisheeye ah balse nolol ku heysta magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka.
Donald Trump ayaa aaminsan in adeeggan uusan waafaqsanayn dastuurka Mareykanka islamarkaana uusan la jaanqaadi doonin sharciyadda socdaalka dalka Mareykanka.
Tusaale ahaan ubadka dadka soo galootiga Mareykanka ee sharciga heysta ama sugayay ayaa hadda noqonaya kuwa aan wax rukhsa ah uheysan in ay Mareykanka sii deganadaan, adeegga DACA ayaa muwaadinimo toos ah siinayay soo galootiga sidoo kale waxay dadkaasi helayeen shaqooyin iyo waxbarasho balse hadda wixii ka dambeeya waxay halis ugu jiraan in dalka laga eryo.
Golaha Koongareeska ayaa lafilayaa in arrinkan ay cod uqaadaan waxayna ubadantahay in ay diidaan, wariyaal ayaa soo sheegay in tallaabadan tahay mid cunsuriyadeed oo Xisbiga Jamhuuriga ku dhaqmayo.
Trump ayaa horay ufuliyay laba kamid ah waxyaabihii uu ballanqaaday xilligii doorashada waxaana kamid ah in dadka kasoo jeedo wadamada islaamka aanay wadanka soo geli Karin iyo in darbi uu ka dhisi doono xadka ay wadaagaan wadamada Mareykanka iy Meksiko.
Trump Oo Dowladaha Gacanka Carabta Ku Amray in Ay Mareykanka Lacago Siiyaan.